Unokuboleka nini kwaye usebenzise uMfanekiso kwi-Intanethi? | Martech Zone
Ishishini endisebenza nalo kutshanje lithumele uhlaziyo kwi-Twitter kunye nekhathuni elihlekisayo elinelogo yabo kuyo. Ndamangaliswa kuba ndandingacingi ukuba baqeshe ikhathuni. Ke, ndibathumele inqaku kwaye bothuka… babeqeshe inkampani yemidiya yoluntu ukuba bazibandakanye kwaye bakhulise oku kulandelayo kwaye bayithumela.
Emva kwengxoxo nenkampani, bothuswe nangakumbi kukufumanisa ukuba yonke imifanekiso, yonke imeme, kunye nekhathuni ekwabelwana ngayo yenziwa ngaphandle kwemvume yenkampani. Bayigxotha inkampani babuya umva basusa yonke imifanekiso ekwabelwana ngayo kwi-intanethi.
Oku akuqhelekanga. Ndiqhubeka ndikubona oku amaxesha ngamaxesha. Omnye wabathengi bam wasoyikiswa ngesimangalo emva kokuba basebenzise umfanekiso owathi injini yokukhangela yayisimahla ukuyisebenzisa. Kwafuneka bahlawule amawaka aliwaka eedola ukuze ingxaki ihambe.
Amashishini anetyala kakhulu lokuguqula imifanekiso ebiweyo yentengiso, kunye ne-49% yeebhlogi kunye nabasebenzisi beendaba zosasazo beba imifanekiso, kunye ne-28% yamashishini.
Nalu uxhatshazo lwamva nje lwenkampani ebesebenzisa ifoto yam istudiyo sepodcast, kodwa babhala uphawu lwabo kuyo:
Ngenxa yotyalo-mali endilwenzileyo kuzo zombini istudiyo kunye nokufota, kuyahlekisa ukuba umntu angabamba nje kwaye aphose ilogo yakhe kuyo. Ndithumele izaziso kuyo yonke imibutho.
Uxolo lwengqondo, sihlala sisenza enye yezi zinto zilandelayo kunye nendawo yethu kunye nabaxhasi bethu:
I qesha abafoti kwaye ndiqinisekise ukuba ishishini lam linamalungelo apheleleyo okusebenzisa kunye nokusasaza iifoto endibaqeshileyo ukuba bazithathe ngaphandle kwemida. Oko kuthetha ukuba ndingazisebenzisa kwiisayithi zam, iisayithi ezininzi zabaxumi, izinto zokuprinta, okanye nditsho nokunika umthengi ukuba azisebenzise nangona zingathanda. Ukuqesha umfoti akukho nje iinzuzo zokufumana ilayisensi, ikwanefuthe elimangalisayo kwisiza. Akukho nto injengendawo yendawo eneempawu zomhlaba okanye abasebenzi babo kwiifoto zabo kwi-intanethi. Yenza indawo ibe yeyakho kwaye yongeza inqanaba lokuzibandakanya.
I qinisekisa iilayisensi zayo yonke imifanekiso sisebenzisa okanye siyasasaza. Nokuba kwindawo yethu, ndiqinisekisa ukuba kukho umzila wephepha kumfanekiso ngamnye. Oko akuthethi ukuba sihlawula yonke imifanekiso, nangona kunjalo. Umzekelo yi-infographic engezantsi- isetyenziswe ngemvume njengoko kuchaziwe kuposti yoqobo ngu Dibanisa.
I-Berify kukukhangela okungasemva komfanekiso ukukunceda ufumane imifanekiso kunye neevidiyo ezibiweyo. Banomfanekiso ohambelana nealgorithm kwaye banokukhangela kwimifanekiso ezizigidi ezingama-800 kunye nedatha yomfanekiso kuzo zonke iinjini eziphambili zokukhangela.
Xa kufikwa kwimifanekiso kunye nemifanekiso ebiweyo, abasebenzisi be-Intanethi-abaqhubela phambili ubusela-bakhetha ukuyicinga njengolwaphulo-mthetho olungenaxhoba abangayifuniyo uxolo. Nangona kunjalo, abafoti abaziingcali kunye nabazithandayo bayayazi inyani- ngaphandle kokungaziphathi kakuhle, ukubiwa kwemifanekiso akukho semthethweni kwaye kuyabiza. Dibanisa
Nantsi i-infographic epheleleyo, Isifinyezo sobusela be-Intanethi. Icacisa ingxaki, ukuba amalungelo kunye nokusetyenziswa okufanelekileyo kusebenza njani (ezona nkampani zixhaphaza kakhulu), kwaye kufuneka wenze ntoni xa ufumana umfanekiso wakho ubiwe.
tags: Qinisekisacopyrightukubiwa kwemifanekisoUkusetyenziswa komfanekisoUkusetyenziswa komfanekisokwi-infographicweba imifanekisoUmxholo obiweyo